Olee otu m ga-esi na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ n’ime Onyenwe anyị mgbe niile? | EKPERE NA OZI
Mgbe ị na-eche maka okwu ahụ "a rejoiceụrị," gịnị ka ị na-echekarị? Nwere ike iche ọ ofụ dị ka ịnọ n'ọnọdụ obi ụtọ mgbe niile ma na-eme ọ everyụ niile gbasara ndụ gị na oke ọlessụ na-adịghị agwụ agwụ.
Kedu maka mgbe ị hụrụ Akwụkwọ Nsọ nke kwuru "na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ mgbe niile n'ime Onyenwe anyị"? You nwere otu mmetụta ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ nke obi-ụtọ?
Na Ndị Filipaị 4: 4 Pọl onyeozi gwara ụka Filipaị, na akwụkwọ ozi, ka ọ na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ n'ime Onyenwe anyị oge niile, na-eme Onyenwe anyị mgbe niile. Nke a na-eweta nghọta ị na-eme, ma ịchọrọ ma ọ bụ na ị chọghị, ma ị na-enwe ọ happyụ n'ime Onyenwe anyị ma ọ bụ na ị chọghị. Mgbe ị na-eme emume jiri echiche ziri ezi n'uche banyere otu Chineke si arụ ọrụ, ị ga-achọta ụzọ iji a rejoiceụrị n'ime Onyenwe anyị.
Ka anyị nyochaa akụkụ ndị na-esonụ na Ndị Filipaị 4 iji ghọta ihe mere ndụmọdụ a sitere n'aka Pọl ji dị omimi na otu anyị nwere ike isi kwenye na nkwenye a na ịdị ukwuu Chineke n'oge niile, na-achọta ọ joyụ n'ime na-eto ka anyị na-enye Ya ekele.
Gịnị bụ ihe gbara ya gburugburu nke Ndị Filipaị 4?
Akwụkwọ Ndị Filipaị bụ leta Pọl onyeozi degaara ọgbakọ dị na Filipaị ka o nye ha amamihe na agbamume iji dịrị ndụ n'okwukwe ha na Kraịst ma nọgidesie ike mgbe esemokwu na mkpagbu nwere ike.
Cheta na mgbe ihe gbasara iru uju mere gi, Paul bu onye oka mmuta. Ọ tachiri obi n’oké mkpagbu maka okwukwe ya na Kraịst na ịkpọ oku n’ozi, yabụ ndụmọdụ banyere otu esi a rejoiceụrị ọ duringụ n’oge ule dị ka ọ bụ ezigbo echiche.
Ndị Filipaị 4 lekwasịrị anya na Pọl na-agwa ndị kwere ekwe ihe ha ga-elekwasị anya n'oge nke ejighị n'aka. Ọ chọkwara ka ha mata na ka ha na-eche nsogbu ihu, ha ga-enwe ike ịmekwu ihe n’ihi na Kraịst nọ n’ime ha (Fil. 4:13).
Isi nke anọ nke ndị Filipaị na-agbakwa ndị mmadụ ume ka ha ghara ichegbu onwe ha banyere ihe ọ bụla, kama ka ha nye Chineke mkpa ha n'ekpere (Fil. 4: 6) ma nweta udo nke Chineke na nloghachi (Fil. 4: 7).
Paul kọwakwara na Ndị Filipaị 4: 11-12 otu ọ siri mụta inwe afọ ojuju ebe ọ nọ n'ihi na ọ maara ihe agụụ na afọ ojuju pụtara, ịta ahụhụ na ịba ụba.
Ma, n’ihe banyere Ndị Filipaị 4: 4, Pọl kwuru nanị na “anyị na-a rejoiceụrị ọ inụ n’ime Onyenwe anyị, mgbe niile. Aga m asị ọzọ, na-a rejoiceụrị ọ !ụ! “Ihe Pọl na-ekwu n’ebe a bụ na anyị kwesịrị ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ oge niile, na anyị nwere mwute, obi ụtọ, iwe, mgbagwoju anya ma ọ bụ ọbụlagodi ike gwụrụ: ekwesịghị inwe oge mgbe anyị na-anaghị enye Chukwu ekele maka ịhụnanya na nnabata ya.
Gịnị ka 'ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ mgbe niile n'ime Onyenwe anyị' pụtara?
Toụrị ọ rejoiceụ, dị ka akwụkwọ ọkọwa okwu Merriam Webster si kwuo, bụ "inye onwe gị" ma ọ bụ "inwe obi ọ orụ ma ọ bụ nnukwu ọ joyụ," ebe ị na-aicingụrị ọ inụ n'ụzọ iji "nwee ma ọ bụ nweta".
Ya mere, Akwụkwọ Nsọ na-ekwupụta na ị rejoụrị ọ inụ n'ime Onyenwe anyị pụtara inwe ọ joyụ ma ọ bụ obi ụtọ n'ime Onyenwe anyị; nwee a joyụrị mgbe ị na-eche maka Ya mgbe niile.
Olee otu esi eme ya, ị nwere ike ịjụ? Ọ dị mma, chee echiche banyere Chineke dịka ị ga-eche onye ị pụrụ ịhụ n’ihu gị, ma ọ̀ bụ onye ezinụlọ gị, enyi gị, onye ọrụ ibe gị, ma ọ bụ onye si na chọọchị gị ma ọ bụ obodo gị. Mgbe gị na onye wetara gị ọ timeụ nọkọrịtara, ị na-a rejoiceụrị ọ orụ maọbụ ọ delightụ ịnọnyere ya. Mee ya.
Ọbụlagodi na ịnweghị ike ịhụ Chukwu, Jizọs ma ọ bụ Mmụọ Nsọ, ị ga-amata na ha nọnyeere gị, nọrọ gị nso otu ị nwere ike. Na-enwe mmetụta na ha nọ mgbe ị nwere obi iru ala n'etiti ọgba aghara, obi ụtọ ma ọ bụ ọfụma n'etiti mwute na ntụkwasị obi n'etiti ejighị n'aka. You na-a rejoụrị ọ inụ n’ịmara na Chineke nọnyeere gị, na-ewusi gị ike mgbe ị dara mba ma na-agba gị ume mgbe ọ bụla ọ dị gị ka ị kwụsị.
Gịnị ma ọ bụrụ na ọ naghị adị gị ka ị rejoụrị ọ inụ n’ime Onyenwe anyị?
Karịsịa n'ọnọdụ ndụ anyị nọ ugbu a, ọ nwere ike isiri ike ị toụrị ọ inụ n'ime Onyenwe anyị mgbe enwere mgbu, mgba na mwute n'akụkụ anyị niile. Otu osila dị, ọ ga-ekwe omume ịhụ Onye-nwe-anyị n'anya, na-a rejoiceụrị ọ alwaysụ mgbe niile, ọbụlagodi mgbe ọ masịghị gị ma ọ bụ nwee oke ihe mgbu iche echiche banyere Chukwu.
Ndị Filipaị 4: 4 na-eso amaokwu ama ama ama ama na Ndị Filipaị 4: 6-7, ebe o kwuru maka mmadụ ịghara ichegbu onwe ya na mmadụ iji obi ya nye Chineke arịrịọ. Amaokwu nke 7 na-eso nke a: "udo nke Chineke, nke kachasị nghọta niile, ga-echekwa obi gị na uche gị nche n'ime Kraịst Jizọs."
Ihe amaokwu ndị a na-ekwu bụ na mgbe anyị na-a rejoiceụrị ọ inụ n'ime Onyenwe anyị, anyị na-amalite inwe udo na ọnọdụ anyị, udo n'ime obi na uche anyị, n'ihi na anyị ghọtara na Chineke nwere arịrịọ ekpere anyị ma wetara anyị udo ọ bụrụhaala ndị a anabataghị arịrịọ.
Ọbụlagodi mgbe ị na-eche ogologo oge ịrịọ arịrịọ maka ekpere ma ọ bụ ka ọnọdụ gbanwee, ị nwere ike ị rejoiceụrị ọ andụ ma nwee ekele maka Onyenwe anyị ugbu a n'ihi na ịmara na arịrịọ gị eruola ntị Chineke, na a ga-aza ya n'oge na-adịghị anya.
Otu ụzọ ị ga-esi a rejoiceụrị ọ whenụ mgbe ọ naghị adị gị ka ọ bụ icheta n'oge gara aga mgbe ị na-eche arịrịọ ndị ọzọ ma ọ bụ n'ọnọdụ ndị yiri nsogbu, yana otu Chineke siri nye mgbe ọ dị ka ọ nweghị ihe ga-agbanwe. Mgbe i chetara ihe merenụ na otu ị si ekele Chineke, mmetụta a kwesịrị iju gị ọ withụ wee gwa gị na Chineke nwere ike ime ya ugboro ugboro. Ọ bụ Chineke hụrụ gị n'anya ma na-elekọta gị.
Ya mere, Ndị Filipaị 4: 6-7 na-agwa anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị, dịka ụwa ga-achọ ka anyị bụrụ, mana nwee olile anya, nwee ekele ma nwee udo n'amara na a ga-emezu arịrịọ ekpere gị. Thewa nwere ike na-echegbu onwe ya maka enweghị njikwa, mana ị gaghị anọ maka na ị ma onye na-achịkwa.
Ekpere iji rejoiceụrịa ọ theụ n'ime Onyenwe anyị
Ka anyị na-emechi, ka anyị soro ihe egosiri na Ndị Filipaị 4 ma na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ n'ime Onyenwe anyị oge niile ka anyị na-enye Ya arịrịọ anyị na-arịọ ma na-eche udo Ya na nloghachi.
Daalụ maka ịhụ anyị n'anya na igbo mkpa anyị dịka ị si eme. N'ihi na ị maara atụmatụ dị n'ihu na ị maara otu ị ga-esi duzie usoro anyị iji kwekọọ na atụmatụ ahụ. Ọ naghị adị mfe oge niile ị rejoiceụrị ọ andụ ma nwee ntụkwasị obi na Gị mgbe nsogbu na ọnọdụ dị iche iche bilitere, mana anyị kwesịrị icheta n'oge anyị nọ n'ọnọdụ ndị yiri ya ma cheta otu ị siri gọzie anyị karịa ka anyị siri chee. Otode ke ekpri ekpri, nnyin imekeme ndibat mme edidiong emi nyin ibode mbemiso inyung ikut ete ke mmo ewak ekan nte nnyin ikesede. Nke a bụ n'ihi na ị maara mkpa anyị tupu anyị ajụọ ha, ị mara ihe mgbu anyị na-enwe tupu anyị enwee ya, ị marakwa ihe ga-eme ka anyị tokwuo iji bụrụ ihe niile anyị nwere ike ịbụ n'anya gị. Ya mere, ka anyị rejoiceụrịa ọ andụ ma rejoiceụrịa ọ asụ ka anyị na-enye Gị ekpere anyị, na-amara na mgbe anyị na-atụghị anya ya, ị ga-eweta ha na mkpụrụ ya.
Ụrị ọ inụ n'ọnọdụ niile, karịchaa n'oge a, nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ. Kaosinadị, Chineke akpọọla anyị ka anyị na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ n’ime Ya oge niile, ebe anyị maara na Chineke ebighị ebi hụrụ anyị n’anya ma lekọta anyị.
Pọl onyeozi maara nke ọma nhụjuanya anyị pụrụ ịtachi obi n’oge anyị, ebe ọ bụ na o nweela oge dị iche iche n’oge ozi ya. Mana ọ na-echetara anyị n’isiakwụkwọ a na anyị ga na-elegara Chineke anya maka olile anya na agbamume. Chineke ga egboro anyi mkpa anyi mgbe ndi ozo enweghi.
Ọ bụ ezie na anyị na-eleghara mmetụta ọ ofụ dị egwu anya mgbe anyị na-agabiga ọnọdụ ndị siri ike, anyị nwere olile anya ikwe ka mmetụta nke udo ahụ dochie mmetụta ndị ahụ ma nwee ntụkwasị obi na Chineke nke malitere ezi ọrụ n'ime anyị ga-emezu ya n'ime ụmụ Ya.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ndụ na Venus? Ihe akaebe na Chineke karịrị ihe anyị chere, Vatican astronomer kwuru
Next Post → Post ozo:Nsọpụrụ na ekpere ndị nchebe taa: 19 Septemba 2020